Usoro 10 maka ire ahia ahia | Martech Zone
Wednesday, June 27, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Mgbe ị na-ekwu maka ịzụ ahịa mkpanaka, echere m na ọ fọrọ nke nta ka ndị ahịa ọ bụla nweta foto dị iche banyere ụdị usoro ị na-ekwu. Taa, anyị mechara otu ọzụzụ ọzụzụ mkpanaka banyere ihe dị ka ụlọ ọrụ 50 nọ. Dị ka Marlinspike na-agba izu soro anyị rụọ ọrụ na usoro ọzụzụ, ọ bịara doo anya na enwere ọtụtụ ihe na azụmaahịa ekwentị karịa ka mmadụ nwere ike iche.
Ndị a bụ 10 Mobile Strategies iji chee echiche banyere:
Voice - n'ụzọ ụfọdụ, a na - ahapụ onye a :). Ma ọ bụ naanị na-ejikọ a na nọmba ekwentị na gị na saịtị, ma ọ bụ na-emepe emepe a nso nsochi usoro na omume azịza site oku na-aga aga ngwaọrụ dị ka Twilio, na-eme ka ụlọ ọrụ gị dị mfe ịkpọ ma nweta ozi gbasara atụmanya gị ga-akwalite usoro ntụgharị.
SMS - Ọrụ ozi dị mkpirikpi. Ọ bụghị ihe nwata, ọtụtụ n’ime anyị na-ezipụ ozi karịa ihe anyị mere n’oge gara aga.
Mobile Mgbasa ozi - ndị a abụghị ọkọlọtọ mgbasa ozi nke ochie. Platformskwà mgbasa ozi ekwentị mkpanaaka nke oge a na-agbanye mgbasa ozi dabere na mkpa, ọnọdụ na oge… na-eme ka o yikarịrị ka onye ziri ezi ọ ga-ahụ mgbasa ozi gị.
Koodu QR - oh otu m si hụ gị n'anya… mana ha ka na-arụ ọrụ. Ekwentị Microsoft na-agụ ha na-ejighị ngwa yana ọtụtụ azụmaahịa na-ahụ ọnụego mgbapụta dị ukwuu - ọkachasị mgbe ị na-amanye mmadụ ibipụta na ịntanetị. Achụkwala ha ugbu a.
Ekwentị mkpanaka - email mkpanaka emeghe ọnụego nwere ọnụ ọgụgụ ghere oghe nke desktọọpụ mana email gị ka bụ akwụkwọ akụkọ ị zụtara 5 afọ gara aga ma enweghị ike ịgụ ngwa ngwa na ekwentị mkpanaaka. Kedu ihe ị na-eche?
Mobile Weebụ - ọbụlagodi na saịtị gị adịghị njikere, ịnwere ike itinye nke ọ bụla n'ime ọtụtụ ngwaọrụ iji mee gị enyi na enyi na enyi na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha zuru oke, mana ha na-arụ ọrụ ahụ karịa ihe ọ bụla. Lelee ọnụego ọnụego gị iji hụ okporo ụzọ ị na-efu.
Azụmahịa Ekwentị (mCommerce) - ma ọ bụ nzụta site na ozi ederede, ngwa mkpanaka, ma ọ bụ mmemme na-abịa n’ihu na nso nso nkwukọrịta, ndị mmadụ na-eme mkpebi zuo si ha mobile ngwaọrụ. Ha nwere ike ịzụta n'aka nke gị?
Ọrụ ebe - ọ bụrụ na ịmara ebe onye ọbịa gị nọ, gịnị kpatara ị ga - eji mee ka ọ kọọrọ gị? Ebe nrụọrụ weebụ dabere na ebe ma ọ bụ ngwa ekwentị nwere ike ime ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ịchọta gị ma bịakwute gị.
Ngwa ngwa ngwa - Abụghị m ezigbo nchekwube banyere mobile ngwa ọdịnala na mbụ… M chere na mobile nchọgharị na weebụ ga-eji dochie ha. Mana ndị folks hụrụ ngwa ha n'anya, ma ha na-achọ nyocha, ịchọta, na ịzụrụ site n'ụdị ha na-azụ ahịa site na ha. Leverage ngwa na-akpali akpali, ọrụ ọnọdụ na mgbasa ozi mmekọrịta n'elu ngwa mkpanaka gị ma ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ na-arịgo. Jide n'aka na embed SDK ka ọkacha mmasị gị nchịkọta ikpo okwu iji nweta nghọta ị chọrọ!
mbadamba - na naa, Enweghị m mmasị na ha na-akụ mbadamba na mobile ma… kama n'ihi ngwa na ihe nchọgharị, echere m na ha dị iche. Site na uto dị egwu nke iPad, Kindle, Nook na Microsoft na-abịa n'ihu, mbadamba na-aghọ ihuenyo nke abụọ folks na-eji mgbe ị na-ekiri telivishọn ma ọ bụ na-agụ n'ime ime ụlọ ịwụ (eww). Ọ bụrụ na ịnweghị swipey mbadamba ngwa (dị ka ndị ahịa anyị Zmags) nke na-erite uru na ahụmịhe onye ọrụ pụrụ iche mbadamba nwere ike ibute, ị na-efu efu.
Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị eche na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-akpali akpali iji dọọ usoro mkpanaka gburugburu. Aga m enye nnukwu ihe atụ nke ụlọ ọrụ nwere ngwa mkpanaka dị egwu na ụlọ ọrụ ị nwere ike ị gaghị eche maka… Behr. Behr ezigala a ColorSmart ngwa mkpanaaka na-ahapụ gị ịhụchalụ agba n'ịgwa, dakọtara a agba iji gị igwefoto ekwentị, chọta kacha nso ụlọ ahịa ịzụta si… na oké nhọrọ nke agba Nchikota nwere ikwu.
Tags: ọrụ ọnọdụmobile ngwaahịa efumobile ahịa azummobile ahịa weebụobere ozi usoroSMSozi ederedeoluigwe okwu